FFmpeg 4.4 inosvika pamwe nekuvandudzwa kwemavhidhiyo emadhodhi, mafirita matsva uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memwedzi gumi yekuvandudza pakupedzisira yakazozivikanwa kuvhurwa kweshanduro nyowani ye ffmpeg 4.4 mariri basa rakawanda rakaitwa kwete chete kugadzirisa iwo encoders uye madhodhi vhidhiyo, asi zvakare kuunza rutsigiro rwe new, pamwe nekuunzwa mafirita matsva uye nezvimwe.
Izvo zvakakoshawo kutaura kuti iyo package ine libavcodec, libavutil, libavformat, libavfilter, libavdevice, libswscale uye libswresample iyo inogona kushandiswa nemaapplication. Zvakare neffmpeg, ffserver, ffplay uye ffprobe, iyo inogona kushandiswa nevashandisi vekupedzisira pakutapudza, kutenderera uye kutamba.
Main nyowani maficha eFFmpeg 4.4
Mune iyi vhezheni itsva yeFFmpeg 4.4 a yezvinyorwa zvitsva Izvi zvinomira pachena ibasa rakaitwa neiyo AV1 fomati, sezvo semuenzaniso mukana wekunyoresa vhidhiyo muAV1 fomati yakaitwa uchishandisa iyo SVT-AV1 (Scalable Vhidhiyo Technology AV1) encoder, iyo inoshandisa hardware kuenzanisira kwehuwandu hunowanikwa muazvino Intel CPUs.
Anomira panze kugona kushandisa iyo Purogiramu inonzi VDPAU (Vhidhiyo Kuratidzira uye Mharidzo) ye Hardware kumhanyisa kwekugadzirisa vhidhiyo muHEVC / H.265 (10 / 12bit) uye VP9 (10 / 12bit) mafomati.
Madhodhi matsva akawedzerwa ayo AVS3, Cintel RAW, PhotoCD, PGX, IPU, MobiClip Vhidhiyo, MobiClip FastAudio, ADPCM IMA MOFLEX, Argonaut Mitambo Vhidhiyo, MSP v2 (Microsoft Paint), IMX Symbiosis, SGA Dhijitari Mifananidzo.
Kana iri nyowani akawedzera encoders atinogona kuwana:
ADPCM Argonaut Mitambo Encoder
Encoding rutsigiro AV1 SVT-AV1
AV1 monochrome encoding rutsigiro kuburikidza libaom> = 2.0.1
Yakakwira Voltage Software ADPCM Encoder
libwavpack encoder yabviswa
RPZA vhidhiyo encoder
T mini subtitle encoder uye muxer
Kana iri iyo mafirita matsva izvo zvakawedzerwa:
Chromanr vhidhiyo firita: Inoderedza ruzha rwemavara muvhidhiyo.
Afreqshift uye aphaseshift mafirita: Inochinja kuwanda uye chikamu chezwi.
Sefa yeAdenorm: inowedzera imwe nhanho yeruzha.
Speechnorm firita: Inoita yekumisikidza kutaura.
Asupercut firita: inobvisa mafambiro ari pamusoro pe20 kHz kubva kurira.
Asubcut firita: Inocheka iyo subwoofer frequency.
Asuperpass uye asuperstop firita: Butterworth frequency firita kuitisa.
Shufflepixels firita: Rongedza mapikisheni mumavhidhiyo mafuremu.
Sefa yemafuta. inoshanda vhidhiyo yenguva pfupi EQ mhedzisiro pakati.
Stdif firita: deinterlacing uchishandisa iyo edge slope kuronga algorithm.
Epx: firita yekukudza yekugadzira pixel art.
Shears: vhidhiyo sheari shanduko.
Kirsch: kushandiswa kweanoshanda weKirsch kune vhidhiyo.
Colortemperature Sefa: Inogadzirisa tembiricha tembiricha yevhidhiyo.
Colourcontrast firita: Inogadzirisa musiyano wemavara pakati peRGB vhidhiyo yezvinhu.
Ruvara rwakarurama: chena chiyero kururamisa kwevhidhiyo.
Colourize: kuputira ruvara pavhidhiyo.
Yekujekesa vhidhiyo firita: Inogadzirisa mwero wekuratidzwa kweiyo vhidhiyo.
Monochrome vhidhiyo firita: inoshandura vhidhiyo yemavara kuita grayscale.
Sefaiti yekuteerera yeAexciter: inogadzira yakakwira-frequency zvikamu zvezwi zvisipo kubva kuchiratidzo chekutanga
Vif uye msad firita: Sarudza iyo VIF (Ruzivo rwekuona Rwakatendeka) uye MSAD (Zvinoreva Sum yeMhedzisiro Misiyano) coefficients kuti uone mutsauko uripo pakati pemavhidhiyo maviri.
Kuzivikanwa vhidhiyo firita: kutsunga kwedanho rekusiyana pakati pemavhidhiyo maviri.
Inoisa firiji firiji: inoisa PTS (nguva yekuratidzira) uye DTS (kududzira nguva sitampu) mumapaketi (zvishoma kurukova).
Chekupedzisira, avo vanoda kuisa kana kugadzirisa FFmpeg 4.4 vanofanirwa kuziva kuti pasuru iyi inowanikwa mune akawanda maLinux kugoverwa kana kana vachida vanogona kurodha pasi rekodhi yekodhi yekubatanidza kubva pane iyi link iripazasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » FFmpeg 4.4 inosvika pamwe nekuvandudzwa kwemavhidhiyo dhodhi, mafirita matsva uye zvimwe